Kiribati ga -agbagha echiche gị na ndụ: ịmalitegharị maka njem na Jenụwarị
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Kiribati ga -agbagha echiche gị na ndụ: ịmalitegharị maka njem na Jenụwarị
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Akụkọ Kiribati • News • ndị mmadụ • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ọ dị narị kilomita asaa site na Honolulu ruo Republic of Kiribati, karịa ife efe na Los Angeles ma ọ bụ San Francisco.
Kiribati bụ otu n'ime agwaetiti ole na ole ama ama, yana ọmarịcha ọla edobeghị maka njem nlegharị anya na South Pacific.
Kiribati, nke bụ Republic of Kiribati, bụ mba agwaetiti nweere onwe ya na etiti Pacific Ocean.
Onu ogugu ndi mmadu kariri 119,000, ihe kariri ọkara n'ime ha bi na atoll Tarawa. Steeti nwere mkpokọta 32 na otu agwaetiti coral, Banab
Ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya nke Kiribati (TAK) anabatala ọkwa ụnyaahụ nke Te Beretitenti, onye isi ya Taneti Maamau banyere mkpebi gọọmentị ya imepe oke mba Kiribati site na Jenụwarị 2022.
Kiribati bụ maka ndị njem - ndị nwere agụụ maka ịgagharị na ịchọpụta, ndị nwere mmasị na njem njem na -aga ebe ole na ole gara aga, yana ndị chọrọ ịghọta obodo - ọ bụghị naanị ịhụ ya.
Kiribati kwupụtara na July, ọ ga -emechi ókèala ya.
Kiribati ga -agbagha echiche gị gbasara etu ndụ kwesịrị ịdị ma gosi gị ụzọ ibi ndụ dị mgbagwoju anya ebe ezinụlọ na obodo na -ebute ụzọ.
N'ịbụ nke dị na Oke Osimiri Pasifik, ọwụwa anyanwụ Kiribati na-enye azụ azụ ụwa (ma egwuregwu ma ịkụ azụ) site na agwaetiti Kiritimati. N'ebe ọdịda anyanwụ bụ Gilbert Group of Islands, nke na -enye ahụmịhe ọdịbendị dị ịtụnanya na nke pụrụ iche.
Isi obodo Tarawa nke mba ahụ nwere ebe akụkọ ihe ochie na ihe ochie ebe otu n'ime agha ọbara nke Agha IIwa nke Abụọ, Agha Tarawa.
Ọ bụrụ na ị na -eleta dịka akụkụ nke ọrụ gị, anyị ga -agba gị ume inyocha Kiribati iji nweta obi ụtọ ndị a - South Tarawa ekwesịghị ịbụ naanị Atoll ị gara mgbe ị nwere 33 ịhọrọ site na ya, ọbụlagodi North Tarawa dị nso na-enye echiche dị iche!
Na ọkwa ya, Onye isi ala Maamau gbara ndị obodo Kiribati ruru eru maka ọgwụ COVID-19 ka ha mechaa ọgwụ ha abụọ tupu afọ agwụ. O kwusiri ike na ịdị n'otu na ime ihe mgbochi na ụkpụrụ dị ezigbo mkpa maka nchekwa nke I-Kiribati niile.
Onye isi ala ahụ kpọrọ oku maka ndị okenye na ndị otu nwanyị, ndị otu ụka, otu ndị ntorobịa, otu ụmụ nwanyị, ndị kansụl agwaetiti, obodo na ndị nna na ndị nne na ezinụlọ ọ bụla ka ha nyere aka gbaa ndị ezinụlọ na ndị enyi ume ịgba ọgwụ mgbochi megide nje a na -egbu egbu.
Site na Mmemme Malitegharị njem, TAK ewepụtala Kiribati Tourism & Protocol Protocols maka Nkịtị Ọhụrụ ma na-eme ọzụzụ nchekwa nchekwa COVID-19 maka ndị niile na-eweta ebe obibi.
Ngwongwo dị na South Tarawa, North Tarawa, Abaiang, Tab North na Tab South agụchala ọzụzụ ha ebe ndị ọzọ na-enye ebe obibi na ndị na-enye ọrụ njem nlegharị anya n'agwaetiti ndị ọzọ ga-enweta ọzụzụ usoro COVID-19 site na Nọvemba 2021. Onye isi oche TAK, Petero Manufolau kwupụtara na a ga-eduzi ọzụzụ na-enye ume ọhụrụ nke ụlọ ọrụ na Disemba 2021, tupu ịmalitegharị ókèala na Jenụwarị 2022.
Dị ka akụkụ nke mmemme ịmalitegharị ya, TAK ga -ebidokwa Digital Marketing Strategy ya na Septemba maka mmejuputa iwu site na Ọktoba 2021, na -enye Pacific Island ebe ọ na -aga ọnwa 3 iji wepụta mkpọsa na mmemme ahịa ya.
Ndị njem na -alọta ma ọ bụ na -eleta Kiribati na nke mbụ na 2022 nwere ike ịtụ anya ahụmịhe ka mma site na mmemme Mauri Mark na -aga, nyocha ụlọ oriri na ọ, ụ, ụ, na nzere nzere, yana Mauri Way, mmemme ndị ahịa ndị njem nlegharị anya nke Kiribati maka ndị niile na -enye ọrụ njem.
A ga-enye nkọwa nke ihe ndị njem Kiribati COVID-19 chọrọ na usoro iwu maka ịmalitegharị mba ụwa n'ọnwa Jenụwarị 2022 ozugbo ọ dị n'aka gọọmentị.